Nkọwapụta --lọ ọrụ - WEITAI
WTM Njem Igwe
PHV Njedebe Ikpeazụ
MAG njem moto
PCR siwing Motor
M2X / M5X siwing Motor
WSM mbịne Motor
Igwe ugbo ala
Weitai Hydraulic bụ otu n'ime China na-eduga haịdrọlik suppliers, ndị mbụ haịdrọlik ụlọ ọrụ nke bụ ọkachamara na mbupụ azụmahịa ruo ọtụtụ iri afọ. Anyị na-agba mbọ ịnye ezigbo ngwaahịa na ọrụ hydraulic na azụmaahịa na ndị ọrụ ikpeazụ n'ụwa niile.
Na mbido mbụ, anyị bụ ndị OEM ụlọ ọrụ, ma jiri nwayọọ nwayọọ ghọọ ụlọ ọrụ zuru oke na-etinye mmepụta, azụmaahịa na itinye ego. Igwe hydraulic bụ otu n'ime ngwaahịa anyị. Na mgbakwunye na ụlọ ọrụ hydraulic nke aka anyị, anyị bụ onye na - ekenye ihe na - emepụta hydraulic dị elu. Anyị ụlọ ọrụ na-niile ISO gbaara na anyị ihe onwunwe suppliers niile nwetara OA, RoHS, CSA na Mankeumman asambodo. Anyị nwere ike ịmepụta ma hazie dịka eserese iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa.
Ngwaahịa ahụ gụnyere ma ọ bụghị nanị na motọ njem, motọ na-agba ọsọ na motọ. Igwe anyị nwere usoro nhazi dị elu ma nyekwa arụmọrụ dị elu, ike dị elu na ezi nkwụsi ike nke dị elu karịa moto ndị asọmpi anyị. Nke a rụpụtara na ọchịchọ na mmepụta nke ihe karịrị 40,000 Weitai njem moto na 2019. Weitai njem Motors ugbu a ọbụna esịne ke mmepụta akara maka excavator emepụta dị ka SANY, XCMG na SDLG.
Dị ka Shandong Hydraulic Association's (SDHA) Secretary Company na mbara mbupụ n'elu ikpo okwu nke n'ógbè haịdrọlik nzukọ, Weitai bụ mpako na-anọchi anya China na ịkọrọ anyị elu àgwà haịdrọlik ngwaahịa na ụwa. A họpụtala Weitai Hydraulic ka ọ bụrụ 2018 Annual External Enterprise na Nzukọ Kwa Afọ na Intelligent Manufacturing Forum nke Shandong Equipment Manufacturing Association, anyị na-agbasi mbọ ike ịnọgide na-enwe ọganihu a.
WEITAI AKWALKWỌ AKW .KWỌ